Sida Loo Dhiso Xidhiidhada Bogag Ay Adag Tahay In La Dhiso | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Sida Loo Dhiso Xidhiidhada Bogagga Ay Adag Tahay In La Dhiso Xidhiidhiyayaasha
Sida Loo Dhiso Xidhiidhada Bogagga Ay Adag Tahay In La Dhiso Xidhiidhiyayaasha
Waxaa laga yaabaa 5, 2020
Todobaadkan loogu talagalay Weydii SEO, waxaan haynaa su'aal uu weydiiyay Anand oo ku sugan India oo weydiiyay:
Sideen u dhistaa isku xirka boggaga adeegyadayda ama boggaga alaabta? Way adag tahay in la dhiso isku-xiryada bogaggaas (sida boostada martida). Wax talobixin ah?
Dhismaha isku xirka waa adag yahay.
Waa sida ay tahay.
Guryaha ma-guurtada ah ee bogga kowaad ee makiinadaha raadinta waaweyni waa gabaabsi.
Waxay u badan tahay inay jiraan in ka badan 10 shabakadood oo macaamiisha ku tartamaya - oo dhammaantood ma wada jiri karaan bogga koowaad.
Sida nolosha, ciyaarta SEO, waxaa jira guuleysteyaal iyo kuwa khasaaray.
Haddii aad rabto inaad noqoto guuleyste, waxaad u baahan tahay inaad fahamto ma aha oo kaliya sida loo dhiso xiriiriyeyaasha - laakiin sida algorithms ee matoorada raadinta waaweyni ay xisaabta ku darsadaan marka la go'aaminayo meesha lagu qiimeeyo goobta.
Mawjadda Sare ayaa kor u qaaday dhammaan Doomaha
Waxaa jira qaar ku khilaafi doona sheegashadan - laakiin waayo-aragnimadayda, fikradda maamulka domain waa dhab.
Ereyga "Maamulka Domain" waxaa soo saaray goobta warshadaha ee Moz.com, laakiin waxay noqotay magacyo caan ah oo ka jira adduunka SEO.
Xirfadlayaal badan oo SEO ah ayaa qallafsada marka ereyga maamulka domain la isticmaalo, sababtoo ah mitirku runtii maahan qodob darajo ee algorithm Google.
Laakiin waxaan aaminsanahay in fikraddu ay sax tahay.
Fikradda maamulka domainka waxay cadeyneysaa marka aad dhisto xiriirinta bog kasta oo ku yaal domain gaar ah, boggaga kale ee ku jira boggaga faa'iido darrada.
Laakiin halkan waa xoqitaanka - faa'iidooyinku maaha kuwo caalami ah, iyo xaalado badan, diido awooddayda si aan u saadaaliyo.
Laakin haddii aad dhisto xiriiriyeyaal boggaga interneedkaaga, waa inaad ku aragto wiish boggaga alaabta iyo adeegyada ah.
Ha iloobin Dhismaha Isku xidhka Gudaha
Dhismaha isku xirka gudaha - habka lagu hubinayo in isku xirka gudaha xadadkaaga goobtaada ay yihiin kuwa ugu fiican - waa mid ka mid ah dhinacyada ugu badan ee SEO.
Ma jirto cudur daar ah in lagu guuldareystay fulinta barnaamijka dhismaha isku xirka gudaha.
Si ka duwan dhismaha isku xirka dibadda, aad xakamee dhinac kasta oo ka mid ah habka dhismaha isku xirka gudaha.
Uma baahnid inaad rajaynayso in maamulaha mareegaha uu ku dari doono isku xidhka alaabtaada ama bogga adeeggaaga.
Waxaad awood u leedahay inaad abuurto qaab-dhismeedka isku xirka gudaha kaas oo gacan ka geysan doona kor u qaadida muuqaalka mashiinka raadinta.
Xaalado badan, ololaha dhismaha isku xirka gudaha ee xiddigta ayaa laga yaabaa inuu ku filnaado inuu ku riixo badeecadaada ama bogga adeegga xagga sare ee natiijooyinka raadinta raadinta (waxay kuxirantahay tartanka iyo arrimo kale oo badan).
Ma geli doono gudaha-iyo-baxyada dhismaha isku-xidhka gudaha ee maqaalkan.
Laakin haddii dhismaha xiriirka gudaha uusan ku jirin arsenal-kaaga - waxaan kugula talinayaa inaad sameyso baaritaan.
Waa mid ka mid ah hantida ugu awoodda badan ee SEO u leedahay boggaga ay adag tahay in la dhiso xiriiriyeyaasha dibadda.
Hal-abuurka & Dhismaha Isku-xidhka Gacmaha-Is-Gacan
Anigu shakhsi ahaan taageere uma ihi farsamo kasta oo isku xidhka dhismaha ee otomaatiga ah.
Dhab ahaantii, waxaan aadi doonaa ilaa hadda si aan u sheego haddii aad akhrinayso farsamada gaarka ah ee dhismaha isku-xidhka, farsamadani waxay u badan tahay in mar horeba laga badiyay oo aan waxtar lahayn sidii hore.
Marka qof kastaa uu ku boodo isku xidhka dhisidda taatikada bandwagon, waxay noqotaa mid si xun loo isticmaalo, iyo inta badan kiisaska waxtarkoodu yar yahay.
Mararka qaarkood hoos u dhaca waxtarku waa algorithmically ka Google.
Laakiin marar badan, farsamadu waxay lumisaa waxtarkeeda sababtoo ah kuwa bixiya isku xirka waxay ku daalaan darajooyin isku mid ah marar badan.
Taasi waa meesha aan joogno martida dhaqameed ee soo dhejinta hadda.
Shakhsi ahaan, kaliya goobta wakaaladayda, waxaan helaa celcelis ahaan 4-5 codsi soo dhejinta martida maalintii.
Inta badan codsiyadani waa mid guud, iyada oo aan wax faa'iido cad ah ii lahayn marka laga reebo nuxurka bilaashka ah oo ay u badan tahay in aan ku habboonayn boggayga.
Laakiin ka hadli maayo sida wax ku ool ah loo sameeyo soo dhejinta martida, sababtoo ah taasi maaha hab hal abuur leh oo lagu dhiso xiriirinta bogga badeecada ama adeegga.
Sidaan horay u sheegay, dhisidda isku xirka waa adag tahay.
Laakiin haddii aad heli karto hal-abuurnimo, oo aad abuurto xidhiidho dhab ah dadka saxda ah, waxaad noqon kartaa wax ku ool ah dhisidda isku xirka boggaga alaabta iyo adeegga.
Raadso dadka wax ka qora alaabtaada ama adeegyadaada oo soo jeediya sheeko ku xidhidhiyaha alaabtaada macno samaynayo.
Hubi inaad iska diiwaan geliso HARO (Caawi wariyaha) oo akhri maalin kasta, adoo raadinaya fursado aad ku dhejiso alaabtaada.
Soo hel boggaga bixiya dib u eegis, liisaska hadiyadaha, ama isbarbardhigga alaabta, ka dibna dheji alaabtaada.
Waxaa jira dhowr fikrado - waxaan hubaa inaad heli karto hal-abuur ka badan aniga.
Dhismaha isku xidhku waa adag yahay, laakiin haddii aanay taasi ahayn, qof kastaa wuxuu lahaan lahaa darajooyin sare.
Hal-abuur samee, oo ha noqonin qof kasta oo kale, oo waxaad ku dhisi kartaa isku-xiryada bog kasta adiga oo leh dadaal dheeraad ah oo yar (ama badan).
Editor's note: Weydii an SEO waa todobaadle SEO talo column waxaa qoray qaar ka mid ah kuwa ugu sarreeya warshadaha SEO khubarada, kuwaas oo ay gacanta ku soo xushay Joornaalka Matoorka Raadinta. Waxaan helay su'aal ku saabsan SEO? Buuxi foomkayaga. Waxaa laga yaabaa inaad ku aragto jawaabtaada boostada #AskanSEO ee soo socota!
Tusaha Dhismaha Isku Xidhka: Sida Loo Helo & Loo Kasbado Xidhiidhada Kobcinaya SEO-gaaga
Dhismaha isku xidhka bilowgayaasha: Sida loo bilaabo
Liis hubinta Dhismaha isku xidhka si aad u kasbato xidhiidho badan & ka wanaagsan
Google Search Console hadda waxay taageertaa qorshaha Ogeysiinta Gaarka ah
Sida ugu dhakhsaha badan oo sahlan loo hagaajiyo dhibaatooyinka Pencil Apple ee caadiga ah